Taariikhqorihii Simple screen waa codsi ah taas oo ka dhigaysa hubiyo in loo shubay screen lagu sameeyo labada android iyo sidoo kale ku dhufto ee kale in ay taageerto. Waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka codsiga tahay taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo natiijada in looga baahan yahay iyo waxa ugu fiican ee ku saabsan codsiga waa xaqiiqda ah in user ay u baahan tahay si aad u hubiso in natiijada ugu wanaagsan ee la sameeyo gudaha waqtiyada in la soo Magacoowdeen taas oo muujinaysa waxtarka arrin ku saabsan. Tutorial waxay ku saabsan tahay ugu sareysa 5 Talooyin in la dacwayn karto si ay u hubiso in isticmaalka app lagu sameeyo hab hufan.
Taariikhqorihii screen Simple, faa'iidada ugu
Dulucda iyo aasaasiga ah ee ku wareegsan xaqiiqada ah waa in interface waa ugu fiican oo wuxuu hubiyaa in user helo natiijada ugu wanaagsan. Isticmaalka The fudud iyo sidoo kale codsiyo ah in lagu gundhig gudahood waxaa uu u suuragelinayaa user si uu u hubiyo in loo shubay screen la sameeyo hab xirfadaysan. Waxaa sidoo kale in la xuso in barnaamijka uu yahay mid ku haboon kuwa hubiyo in gobolka oo ka mid ah ka eryaa screen tahay waxaa lagu uploaded in internet-ka si ay u helaan views dheeraad ah sameeyaan.
Sidoo kale waa in la ogaadaa in adigoo isticmaalaya barnaamijkan user la hubo in content la monetized badan YouTube iyo natiijada ugu wanaagsan ayaa ahbaa ka dhigi kara. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in ugu fiican iyo gobolka functionalities tahay gundhig waxaa si fudud helay iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in functionalities, kuwaas oo loo isticmaali karo si loo hubiyo in qodob ka mid ah nadiif ah oo cad oo loo shubay screen waxaa sidoo kale sii raagayaan. Barnaamijka waxaa loo sameeyay si loo hubiyo in user helo ugu fiican taas oo aan culays ku miisaaniyadda iyo qiimaha lacagta uu soo qaatay la helay tayo iyo fasalka. Si aad fikrad ka sii lacag badan ku dhiirigelinayaan in uu sidoo kale xaqiijiyey in interface la sameeyo soo jiidasho leh element oo ah xog iyo taas oo ka dhigaysa taariikhqorihii screen fudud pro mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee lagu iibiyo online.
Isticmaalka wax ku ool ah
Waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in natiijooyinka laga helo sida looga baahan yahay mar tutorial waxaa lagu akhriyey buuxa sameeyo. Waxa kale oo hubin doona in user helo ugu wanaagsan ee reer barnaamijka iyo haddii saaxiib ama mid kasta oo yaqaan waxa la isticmaalayo isku waslad ka dibna isaga ama iyada la hanuunin lahaa iyo sidoo kale.
Hoos waxaa ku qoran ugu sareysa 5 Talooyin in user a waa codsan si loo hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee natiijada farshaxanka waxaa lagu helaa iyadoo la isticmaalayo barnaamijka:
Qaab 1. File
Waa qaybta ikhtiyaarka barnaamijka taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan oo loo shubay shaashadda lagu sameeyey si waafaqsan shuruudaha user ah. Format ayaa sidoo kale waa in la soo xulay waxaa ka si loo hubiyo in mid ka mid ah ayaa loo doortay in ay taageertaa video iyo sidoo kale ciyaartoyda audio in lagu rakibay gal nidaamka.
2. Video aqbasho
User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in aqbasho video ayaa sidoo kale la bedelay sida baahida iyo dalabaadka isticmaalaha. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee doorasho tahay ayaa loo soo xulay si ay u helaan shaqo lagu sameeyey hab wanaagsan ah,
3. guddi duubay
Waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah wax soo saarka duubo tahay ayaa ahbaa sameeyo iyo tan si fudud loo samayn karaa iyada oo la hubiyo in guddi duubo waxaa loo isticmaalaa in lagu joojiyo, ku xasil iyo sii cajalado si uu u sameeyo hubiyo in shaashadda loo shubay ugu wanaagsan ee la sameeyo la kulma storyline ah.
4. Dual cajalado
User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in ay cajalado dual yihiin karti iyo dadka naafada ah iyo waxa la qaban karo, ay xaq u riixaya bar hawl in uu ku yaalaa ugu sareysa ee. Waxaa sidoo kale in la xuso in user wuxuu hubinayaa in in ugu fiican iyo kan gobolka ee natiijada farshaxanka loo ururiyey oo wakhtiga waa la soo badbaadiyay adeegsado buugga diiwaanka ku screen dual:
5. Ifafaalaha qaadashada profile
User ayaa Khasab ma aha in xadaynta goobaha ay mar walba barnaamijka loo isticmaalo iyo waxa ay tahay in la xuso in ugu fiican oo gobolka ka mid ah wax soo saarka tahay ayaa dhalin iyadoo la kaashanayo profile u samaynta la mid kasta isagoo ah goobaha gaarka ah in la bedelo sida qaan gaadh ah oo mashruuca:
Wondershare Video Convertor Ultimate waa ugu fiican oo gobolka ka mid ah qalab tahay in la hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay marka la barbar dhigo duubo shaashadda pro fudud dhigi lahaa. Barnaamijka ayaa ku soo beegmay iyadoo dhisay taariikhqorihii video oo loo isticmaali karo si loo hubiyo in natiijada ugu wanaagsan ayaa ahbaa eego rakibo sida ku rakibidda barnaamijka ugu weyn ee la hubiyo in taariikhqorihii video ah ayaa sidoo kale lagu rakibay dhigi lahaa. Barnaamijku wuxuu kaloo taageertaa goynta, qaybsama, tafatir, geeyo iyo video ah. The cusub iyo technology ugu horumarsan ee 4K iyo HD ayaa sidoo kale lagu taageeray by barnaamijka.
Barnaamijka waxaa si weyn lagu talinayaa sabab u tahay ka dib markii shan sifooyinka waxaana lagu soo gudahooda:
Wareejinta ee files waa 30X dhakhso marka la barbar dhigo barnaamij dhaqameed taas oo macnaheedu yahay in user ma u baahan tahay inaad sugto muddo saacado ah ka hor inta qaab beddelidda.
Barnaamijka ayaa lagu taageerayaa ka badan 150 qaabab iyo sabab la mid ah waxa loo isticmaali karaa si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay ahbaa fudayd iyo qanacsanaanta.
Xarunta warbaahinta ayaa sheegay in ayaa gundhig gudahood waa inuu xaqiijiyo in geeyo warbaahinta Internet-ka waxaa loo sameeyaa in shaashadda fudayd iyo qanacsanaanta.
Muuqaalka guud ee barnaamijka fog tahay aad uga fudud marka loo eego kuwa la heli karo online.
Barnaamijka ayaa ku soo beegmay iyadoo lacag onetime iyo inta kale ee updates waa lacag la'aan u ah nolosha.
> Resource > Video > Top 5 talooyin aad u baahan tahay ogaato oo ku saabsan screen fudud oo taariikhqorihii